Guddiga doorashooyinka Qaranka oo diwaangaliyeey Sadex Urur siyaasadeed (Sawiro) – Radio Daljir
Guddiga doorashooyinka Qaranka oo diwaangaliyeey Sadex Urur siyaasadeed (Sawiro)
Abriil 8, 2018 4:07 g 0
Xisbiyada maanta Shahaadooyinka la siiyay ayaa kala ah Xisbiga wadajir, Xisbiga cadaaladda iyo Midnimada Iyo Xisbiga Samo.
Kamaal Guutaale oo ka hadlayay Munaasabad kooban oo maanta lagu qabtay xarunta gudiga ee magaalada Muqdisho ayaa xusay isaga oo ku hadlayay magaca xisbiyada maanta la diiwaan galiyey in ay Bulshada Soomaaliyeed ahmiyad wayn u leeyahay nidaamka xisbiyada badan oo dalka ka hirgalaya.
Xaliima Ismaaciil Ibraahim Guddoomiyaha Gudiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa Iyana xustay in diiwaan galintan ay tahay mid KMG, lana dhamaystirayo dhawaan shuruucda doorashada dalka oo qeexaysa hanaanka loo marayo meel marinta kama dambaysta ah ee Xisbiyada.
Horay gudiga doorashooyinku waxa uu diiwaan galin KMG ah siiyay 7-Xisbi, taas oo marka 3-da maanta la diiwaan galiyey lagu daro ka dhigaysa 10-Xisbi siyaasadeed oo aqoonsi KMG ah haysta inay dalka ka jiraan.
Taliyaha Cusub ee Ciidanka Madaxtooyadda Muqdisho oo xilka la wareegay